कुरा रमेश खरेलकै ! | Bishow Nath Kharel
कुरा रमेश खरेलकै !
काठमाडौ, जेष्ठ २२ –
चर्चामा एकपटक फेरि रमेश खरेल छन् । अलि अघि काठमाडौंको प्रहरी प्रमुख (एसएसपी खरेल) भेट्न नआएको भन्दै गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आफ्नो पार्टीको युवा संघको भेलामा असन्तुष्टि जनाएपछि उनी चर्चामा थिए । एउटा कार्यक्रममा बढुवाका लागि उच्च दर्जाका पुलिस हाकिम बि्रफकेस बोकेर नेताको दैलोमा धाएको टिप्पणी गरेपछि चर्चामा आएका उनको यसपछिका घटनाक्रमले चर्चा चुलिएको छ ।
मिडिया/सोसल मिडियामा उनको भाषणको चर्चा भयो । पर्सिपल्ट उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा काज सरुवा गरी उनको ठाउँमा एसएसपी उत्तम कार्कीलाई सरुवा गर्न गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग सहमति मागेपछि उनको थप चर्चा भयो । काठमाडौं क्षेत्र-२ मा उपनिर्वाचनको कारण आचारसंहिता लागू भइसकेकाले आयोगको सहमति चाहिएको हो ।
खरेलको सरुवाको विरोधमा माहोल देखेरै होला आयोगले सहमति दिएन । आयोगले सोमबार त खरेलाई साविककै ठाउँ (काठमाडौं प्रहरी परिसर, हनुमानढोका) मै निरन्तरता दिन आदेश दिएको छ । तैपनि खरेल स्वयम्चाहिँ लामो बिदामा बस्ने तयारीमा छन् । गृहमन्त्रीसँगै सोझै पौंठेजोरी खेलेर बस्न नहुने भन्दै शुभचिन्तकले समेत सल्लाह दिएपछि खरेल यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । भाषण गरेको दोस्रो साता पनि उनी चर्चामा छन् ।
खरेलको ‘सेलिबि्रटी’ पुलिस अफिसरको पहिचान बनेको छ । नत्र उनको सरुवाको विरोधमा हस्ताक्षर संकलन, प्रदर्शन हुन्थेन । आइबार उनलाई सरुवा नगर्न माग गर्दै वसन्तपुरमा प्रदर्शन भएको थियो । प्रदर्शनमा उल्लेख्य संख्यामा युवा राष्ट्रिय झन्डा बोकेर उपस्थित थिए । उनको संगठनमा एसएसपी ७५ जना छन् । माथिल्लो दर्जाको डीआईजी पदमा ३४ जना हुन्छन् । एआईजीपी ७ जना र एकजना आईजीपी हुन्छन् ।
तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ र हक्की स्वभावको कारण संगठनभित्र अलि छुट्टै अफिसरको पहिचान सुरुदेखि नै बनेको थियो । ‘संगठनमा बढी घूस खाने भनेर बद्नामी कमाएका सिनियरलाई नटेर्ने, मुख छाड्न पछि नपर्ने उनको स्वभाव पहिलेदेखिकै हो,’ पुलिसका एक उच्चपदस्थ अधिकारी टिप्पणी गर्छन । चार वर्षअघि एसपीको रूपमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख हुँदा उनका हाकिम (महानगरीय प्रहरी आयुक्त) थिए, अर्जुनजंग शाही । शाही उनको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ का पुलिस अफिसर थिए । शाहीले सञ्चार सेटबाटै उनको आदेश अवज्ञा गरिदिन्थे । एकचोटी शाहीले उनलाई पक्राउ परेको मान्छे छाडिदिन आदेश दिए ।
‘तपाइँ एआईजीपी भए पनि एसपीकै काम गर्न पुगेको रहेनछ, आउनुस मेरो कुर्सीमा बसेर मान्छे छाड्नुस्,’ उनको जवाफ थियो । भावावेशमा आएर केही बोलिहाल्ने कमजोरी रहेको खरेल सुनाउँछन् । ‘सारा कर्तव्य बिर्सेर पैसाको पछिमात्र दगुरेका मान्छे हाकिमनै भए पनि श्रद्धा आउँदैन,’ उनी भन्छन् ।
अझ भोजभतेरमा हल्का मदिरा सेवन गरेका खरेलले आफ्नै पुलिस अधिकारीमाथि टिप्पणी गरेको धेरै उदाहरण छन् । केहीअघि एउटा पार्टीमा एक अवकाशप्राप्त पुलिस अफिसरले तिमीले राम्रो गरेका छौ, बधाई भन्दै हात मिलाए । जवाफ उनले के गर्नु सर तपाईं जागिर खाउन्जेल लुट्नेबाहेक केही गर्नुभएन भन्दिए । ‘आफ्नो नजरमा बदनामलाई उनले अरूकै अघि प्याच्च भन्ने उसको बानी छ,’ प्रहरीका एक डीआईजीपी सुनाउँछन् ।
भलिबलको राष्ट्रिय टिमका खेलाडी २०४५ सालमा खेलाडीकै रूपमा नेपाल पुलिस प्रवेश गरेका थिए, दर्जा थियो प्रहरी जवान । तर पढाइमा पनि अब्बल उनी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत १ वर्षमै प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) भए । त्यसयता उनले पछि फर्केर हेर्न परेको छैन । इन्सपेक्टर भएपछिका ३ वटा प्रमोसन (डीएसपी, एसपी र एसएसपी) मा उनी पहिलो नम्बरमा रहे । अहिलेकै कानुन यथावत् रहे, अबका प्रमोसनमा पछि नपारिए उनी ४ वर्षपछि नेपाल पुलिसको महानिरीक्षक (आईजीपी) हुनेछन् । करिब १ वर्ष संगठनको कमान्ड सम्हालेर उनले अवकाश पाउनेछन् ।
उनी ललितपुर जिल्लामा डीएसपी थिए । रिङरोडमा कारमै यौन कार्य गरिरहेका जोडी फेला परेको खबर सञ्चार सेट मार्फत पाए । जोडाको पुरुष, जो काठमाडौंको ‘ठूलाबडा’ को छोरा थियो, ले पुलिसलाई गालीगलौज गरेको खबर थियो । उनले पक्राउ गरी थुनिदिन आदेश दिए । थुनुवालाई छाड्न उनलाई रातभर दबाब आइरह्यो । पुलिसकै एआईजीपी (आईजीपीपछिको दोस्रो ठूलो पद) ले तत्काल नछाडे कारबाही हुने चेतावनी दिए पनि उनले टेरपुच्छर लगाएनन् । भोलिपल्ट खरेलको सरुवा भयो, ठूला बडाको छोरा ससम्मान रिहा भए । त्यतिबेला मिडिया यति सशक्त थिएन, सोसल मिडिया थिएन । ‘यसैले सार्वजनिक स्थलमा यौनक्रिया गरी पुलिसलाई दुव्र्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्न खोज्दा सरुवा भोग्नपर्‍यो, उनी समन्छन् ।
अवस्था यति बदलिएको छ कि अनुशासन तोडेकै हो भन्ने पनि उनलाई कारबाही गर्न हुन्न भन्छन् । यसअघि पनि पुलिस अफिसरलाई नसुहाउने खालको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै दिएका छन् । एसपी हुँदै (४ वर्षपहिले) उनी काठमाडौंको पुलिस प्रमुख थिए । बढुवाका आकांक्षी उनको त्यतिबेला बढुवा भएन । असन्तुष्टि जनाउँदै उनले मिडियामा अब काठमाडौंको प्रहरी प्रमुखको कुर्सीमा (हनुमानढोका) जान्नँ भन्दिए । उतिबेलै तत्कालीन आईजीपी रमेशचन्द ठकुरी र गृहमन्त्री भीम रावलले उनलाई कारबाही गर्न खोजेका थिए । उनको पक्षमा जनदबाबका साथै पुलिसमै उनलाई माया गर्नेले उनलाई बचाएका थिए ।
सिरहामा पुलिस प्रमुख बनेपछि मिडियाको नजर परेको हो । सशस्त्र समूहले आक्रान्त जिल्लामा उनले यस्ता समूहमाथि अभियान चलाएका थिए । केही समयमै जिल्ला शान्ति सुरक्षा ट्रयाकमा आएको थियो । त्यतिबेला उनले विराटनगर मुकाम भएका डीआईजीले पैसा उठ्तीपुठ्ती गर्न पठाएका घुमुवा (सादा पोसाकधारी) पुलिसलाई समातेर मुद्दा लगाएको घटना पनि चर्चित बनेको थियो ।
पोखरामा उनले गुन्डागर्दी र बेश्यावृत्तिविरुद्ध अभियानले काठमाडौंमा चर्चा पाएको थियो । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध माओवादीले काठमाडौंमा अनिश्चितकालीन आमहडताल आवह्वान गर्दै देशभरिका कार्यकर्तामा राजनधानी उतार्न थालेपछि उनलाई काठमाडौंको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यतिबेला माओवादीको आमहड्ताल हिंसात्मक हुन सक्ने आशंका थियो । यसैले उनले मौका पाएका थिए । तर उनले मौकाको सदुपयोग गरे, राजधानीमा उनको चर्चा थप चुलियो ।
सामान्यतया सानालाई हेपिहाल्ने ठूला भनेपछि गल्ती गर्ने भए पनि जी हजुरी गर्ने प्रवृत्ति पुलिसमा झन् बढी छ । केटाले गल्ती गरेछ भन्दै खोसिएको लाइसेन्स घरमै पुर्‍याइदिने कुरा पुलिसमा नौलो होइन । तर खरेलको शैली उल्टो छ । उनी ठूलाबडा भनिएको छ भने झन नछाड्ने उनको स्वभाव छ । धेरैतिर दबाब आए झन् बढी थुनिदिने उनको स्टाइल हो । ‘उनी थुनामा रहेकालाई बोलाएर तपाईलाई आज छोडिदिन्थे, सोर्स लगाउनुभयो,’ खरेललाई उद्धृत गर्दै उनका एक सहकर्मी भन्छन्, ‘अब केही दिन थुनामै बस्नुस् ।’ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह मध्यरात क्यासिनोमा नाच्दै फेला परेपछि उनले थुनिदिए । उनलाई राति नै छाड्न काठमाडौंका धेरै ‘ठूलाबडा’ प्रयास गरे तर उनले भोलिपल्टमात्र छाडे । आईजीपीकै बहिनी नाता पर्ने (ठमेल तमास रेस्टुरेन्ट मालिक) लाई उनले थुने ।
उनलाई कार्यशैलीको कारण रुचाउने धेरै छन्, उनलाई नरुचाउने पनि मनग्गे छन् । प्रहरीभित्रै बहुसंख्यक सिनियर अफिसरले उनलाई मिडियाको हिरो भनेर गाली गर्छन् । राजनीतिमा संलग्नले पनि उनलाई कसिङ्गर ठान्छन् । नेताले सामान्यतया समाजमा गुन्डा, फटाहाको तरफदारी गर्ने भएकाले उनी सुन्दै सुन्दैनन् । कतिपय अवस्थामा त नेताले भनेको ठीक कुरा पनि नसुन्ने उनको बानी छ । पोखरा र काठमाडौंको पहिलो कार्यकालमा उनले वाहवाही पाए । अहिले मिडियाको लागि रमेश खरेल यस्ता हटकेक जो बजारमा हाताहात बिक्री हुन्छ । अनलाइन मिडियामा उनी जोडिएका समाचारका पाठक सबैभन्दा बढी हुन्छन् ।
Source : http://www.ekantipur.com/qatar/news/news-detail.php?news_id=207455